Abenzi be-fiberglass yelanga yelanga kunye nababoneleli - i-china i-fiberglass ye-sunscreen yelaphu yelaphu
Iminyaka emi-5 iwaranti yoGcino lweLolive yoGcino lweGlasi
Ngogxininiso loyilo lwala maxesha lokufiphaza, ukwanda kwebango leemveliso zokwenza umthunzi kuye kwabangela ukuvuselelwa kwamalaphu amfama. Amalaphu blinds Modern ukudibanisa umbala, elubala, ukhuselo lokusingqongileyo kunye uhombiso, kwaye zamkelwe zonke iindlela zobomi. Zikwasivumela ukuba sisondele kwindalo kwaye sinike ingqalelo ebomini. Izinto zelaphu eliyimfama ikakhulu zibandakanya iglasi yefayibha yepolymer yezinto ezidityanisiweyo kunye nezinto zepolyester ifayibha ephathekayo.
Ilaphu leglasi yefayibha yeGroupeve inokuqina okuzinzileyo, umlinganiso we-deformation emva kotshintsho lobushushu kunye noxinzelelo lincinci, kwaye amandla okuqina omelele, inqanaba lomlilo liphezulu, kwaye ubomi benkonzo bude kakhulu.
China Eco-friendly Fibreglass Ilanga Ilaphu 5% Ukuvuleka
Ilaphu le-fiberglass ye-fiberglass yelanga yelukiwe ngumgangatho ophezulu weglasi yefayibha eyenziwe ngePVC ngenkqubo ekhethekileyo. Kukho ukungafihli okwahlukileyo onokukhetha, njenge-1%, 3%, 5%, 10%. Phakathi kwazo, i-10% yelaphu evulekileyo inokufumana ukukhanya kwendalo okuhle kunye nokungafihli, kodwa ukusebenza ngokuchasene nemitha yelanga kunye nelitha kukubi. Ngokubanzi sicebisa ukuba kusetyenziswe amalaphu ngomyinge we-10% wokuvula kumanqanaba athile okuvezwa lilanga (njengasentla). Iya kusetyenziswa kananjalo nakwezinye iindonga zeglasi ezinemibala ukuze zifumane ezona zibane zendalo kunye nokungafihlisi.
Ngokushwankathela, kukho iintlobo ezininzi zefayibha ye-fiberglass yelanga ngenxa yentlangano eyahlukeneyo, ukuvuleka kunye nombala, ukhetho lwamalaphu e-fiberglass elangeni kufuneka iqwalasele iindlela ezimbini, oko kukuthi, umgangatho welaphu ngokwalo kunye nemeko yokusetyenziswa. Singanika eyona ngcebiso intle kubathengi bethu.
Eco-friendly Antibacterial yangaphandle Fibreglass Solar Screen Ilaphu
Ifayibha yeglasi yinto engaqhelekanga engesosinyithi enentsebenzo egqwesileyo kunye nenxalenye ebalulekileyo yelaphu le-fiberglass yelanga. Izithako ziyi-silica, i-alumina, i-calcium oxide, i-boron oxide, i-magnesium oxide, i-sodium oxide kunye nezinto ezinjalo. Ilaphu le-fiberglass yelanga lesikrini lenziwe ngezimbiwa zendalo (i-quartz, isanti, isoda, ikalika). Ngaphambi kokuluka, ifayibha nganye yeglasi yambathiswe nge-PVC, yanitha ngomthungo omnye, kwaye ekugqibeleni iseti yobushushu kwaye yomelezwa. Le fomu ilaphu eliqhelekileyo lokuluka.
Ukwakheka kwe-fiberglass yelaphu yelaphu yelaphu yi-35% ye-fiberglass kunye ne-65% ye-PVC okanye i-30% ye-fiberglass kunye ne-70% ye-PVC ngokungqinelana okungafaniyo.
Eco-friendly Fibreglass elangeni Ilaphu 36% Fibreglass kunye neepesenti ezingama-64 zePVC
Ilaphu le-fiberglass ye-fiberglass yelanga yelukiwe ngumgangatho ophezulu weglasi yefayibha eyenziwe ngePVC ngenkqubo ekhethekileyo. Ikhululekile kwizinyithi ezinobunzima kunye nezinto eziyingozi, ikhuselekile kwaye inobuhlobo, akukho livumba lingaqhelekanga, akukho monakalo emzimbeni womntu, uzinzo oluphezulu kakhulu, ezintle kwaye ezintle, kunye nokuthelekiswa kombala nako kufanelekile ekuhombiseni kwale mihla.
Zininzi iintlobo zelaphu le-fiberglass elangeni ngenxa yentlangano eyahlukeneyo, ukuvuleka kunye nombala, ke ngoko ungayikhetha njani ilaphu le-fiberglass yelanga kubaluleke kakhulu. Sinokubonelela ngeesampulu zasimahla kubathengi bethu ukuze ukhethe ilaphu kwaye ujonge umgangatho ngokuthe ngqo. Ngaphezu koko, onke amalaphu ethu avavanyiwe ngaphambi kokuhanjiswa ukuqinisekisa umgangatho.
Ixabiso leFektri yeeRoller Blinds zeFiberglass Ilanga lesikrini
Ilaphu le-fiberglass elangeni lilukiwe ngamandla aphezulu eglasi yefayibha e-PVC ngenkqubo ekhethekileyo. Inokuthintela ngokufanelekileyo ukukhanya kwelanga kunye nemitha ye-ultraviolet, eluncedo kwimpilo; Ukucoca ukukhanya kwelitha, fumana ukukhanya kwendalo, ukuphucula umgangatho wokukhanya ngaphakathi, ukuphucula intuthuzelo yentsimi ebonakalayo; ukunciphisa ukulahleka kwemigca etyheli namanzi, kwaye unokubona ngaphandle ngokucacileyo ngaphandle kokutshabalalisa ukubonakala okubonakalayo. Kukho ukungafihli okwahlukileyo onokukhetha, njenge-1%, 3%, 5%, 10%. Yeyona nto iphambili emisela ukusebenza kwelaphu kwilaphu.
Ngamafutshane, zininzi iintlobo zeendwangu ze-fiberglass ze-sunscreen ngenxa yentlangano eyahlukeneyo, ukuvuleka kunye nombala.
Imfashini yeFiberglass yeLanga elikwiLaphu le-38% iFiberglass kunye ne-62% yePVC
Ilaphu le-fiberglass ye-fiberglass yelanga yelukiwe ngumgangatho ophezulu weglasi yefayibha eyenziwe ngePVC ngenkqubo ekhethekileyo. Kukho ukungafihli okwahlukileyo onokukhetha, njenge-1%, 3%, 5%, 10%. Yeyona nto iphambili emisela ukusebenza kwelaphu kwilaphu. Singakhetha amalaphu avulekileyo ahlukeneyo ngokweemfuno zommandla esikuwo isakhiwo. I-5% isetyenziswa ngokubanzi, ibhloka imitha yelanga. Ukulawula ilitha kunye nokufumana ukukhanya kwendalo kunye nokubonakala okuhle, ngokubanzi sicebisa emazantsi.
Isishwankathelo, zininzi iintlobo ze-fiberglass ye-sunscreen amalaphu ngenxa yentlangano eyahlukeneyo, ukuvuleka kunye nombala, ukhetho lwamalaphu e-fiberglass elangeni kufuneka athathele ingqalelo iindlela ezimbini, oko kukuthi, umgangatho welaphu ngokwalo kunye nemeko yokusetyenziswa. Singanika eyona ngcebiso intle kubathengi bethu.
Flame nekudodobalisa Fibreglass Ilanga Ilaphu For Office
Ilaphu le-fiberglass ye-fiberglass yelanga yelukiwe ngumgangatho ophezulu weglasi yefayibha eyenziwe ngePVC ngenkqubo ekhethekileyo. Ayikwazi kuphela ukuphelisa ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-80 zemitha yelanga, kodwa ikwagcina nokujikeleza komoya ngaphakathi, kwaye inokubona ngokucacileyo imbonakalo yangaphandle. Inepropathi yokudodobalisa idangatye engafunyanwa kwamanye amalaphu. Ilaphu le-fiberglass yokwenene yelanga ayizukukhubazeka okanye ikhabhoni ngenxa yokuba amathambo angaphakathi elaphu yifayibha yeglasi emva kokutsha. Kwimpahla eqhelekileyo, onke amathambo ayatshiswa kwaye enze icarbonized emva komlilo.
Zininzi iintlobo zelaphu le-fiberglass elangeni ngenxa yentlangano eyahlukeneyo, ukuvuleka kunye nombala, ke ngoko ungayikhetha njani ilaphu le-fiberglass yelanga kubaluleke kakhulu.
Ukucaba okuLungileyo okuPhuma ngaphandle kweFiberglass Ilanga lesikrini Ilaphu le-2.5m Ububanzi
Ilaphu le-fiberglass ye-fiberglass yelanga yelukiwe ngumgangatho ophezulu weglasi yefayibha eyenziwe ngePVC ngenkqubo ekhethekileyo. Yiminerali yendalo kwaye ayiboneleli ngendawo yokukhula kwebhaktiriya. Iibhaktheriya azikwazi ukuvelisa kwaye iingubo aziyi kubumba. Ayizi adsorb amasuntswana aqinileyo emoyeni kwaye ayihambelani nothuli nokuba, olunokunciphisa ngokufanelekileyo inani lothuli. Ngaphezu, akukho mfuneko yokuqinisa, ukumelana neenyembezi zendalo, kunye nokumelana okubalulekileyo komoya kunye neempawu zoomatshini ezinokumelana nokusetyenziswa rhoqo.
Ukuhonjiswa kwasekhaya Ilaphu leScreen leLanga 38% I-fiberglass kunye ne-62% yePVC
Ilaphu le-fiberglass elangeni lilukiwe ngamandla aphezulu eglasi yefayibha e-PVC ngenkqubo ekhethekileyo. Inokuthintela ngokufanelekileyo ukukhanya kwelanga kunye nemitha ye-ultraviolet, eluncedo kwimpilo; Ukucoca ukukhanya kwelitha, fumana ukukhanya kwendalo, ukuphucula umgangatho wokukhanya ngaphakathi, ukuphucula intuthuzelo yentsimi ebonakalayo; ukunciphisa ukulahleka kwemigca etyheli namanzi, kwaye unokubona ngaphandle ngokucacileyo ngaphandle kokutshabalalisa ukubonakala okubonakalayo. Kukho ukungafihli okwahlukileyo onokukhetha, njenge-1%, 3%, 5%, 10%. Yeyona nto iphambili emisela ukusebenza kwelaphu kwilaphu. Singanika eyona ngcebiso intle kubathengi bethu.
Zilungele iihotele, izindlu zokuhlala, iindawo zokuhlala eziphezulu, iindawo zokuzonwabisa, njl njl. Uluhlu ngalunye lupakishwe kwityhubhu eyomeleleyo yephepha.
Eyona ndawo aziwa ngayo yiFiberglass Sunscreen Fabric 5% evulekileyo
Ilaphu le-fiberglass ye-fiberglass yelanga yelukiwe ngumgangatho ophezulu weglasi yefayibha eyenziwe ngePVC ngenkqubo ekhethekileyo. Kukho ukungafihli okwahlukileyo onokukhetha, njenge-1%, 3%, 5%, 10%. Phakathi kwabo, i-1% ukuya kwi-3% yokuvulwa kwelaphu kunokubuthintela ubushushu obuveliswa yimitha yelanga ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphezulu kunye nolawulo lwelitha, kodwa ukukhanya kwendalo kuya kungena kancinci kwaye umphumo wokungafihli nto ulihlwempu. Ke ngoko, sihlala sicebisa ukuba sikhombise ukukhanya kwelanga (njengasentshona) kwaye xa udonga lwekhethini luyiglasi ebonakalayo. Ukusombulula ingxaki yobushushu obunamandla kunye nelanga eliqaqambileyo.
Iimfama zangaphandle kunye ne-Awnings Porch Fibreglass Solar Screen Fabric
I-fiberglass yelanga yelaphu lesikrini ilukiwe ngamandla aphezulu eglasi ifayibha eyenziwe nge-PVC ngenkqubo ekhethekileyo. Izinto eziluncedo zefayibha ye-fiberglass yelaphu enokusetyenziselwa ukushicilela ilanga inokushwankathelwa ngokulula:
Ngokukodwa ibhekisa ku:
1. Vimba ubushushu obuveliswa yimitha yelanga, ukunciphisa ngokufanelekileyo umthwalo wokungenisa umoya;
2. Ukucoca ilitha, fumana ukukhanya kwendalo, ukuphucula umgangatho wangaphakathi kunye nokuthuthuzela okubonakalayo;
3.Fumana ukungafihli okubalaseleyo, okungenakuphela nje ukonwabela ubuhle bendalo obucacileyo ngaphandle kodwa kuthintele nabantu bangaphandle ekuboneni;
4. Ngokufanelekileyo vimba imitha ye-ultraviolet eyomeleleyo ukuba ingangeni kwigumbi, eluncedo kwimpilo.
Ilaphu le-fiberglass elangeni elingu-5% evulekileyo
Ilaphu le-fiberglass elangeni lilukiwe ngamandla aphezulu eglasi yefayibha e-PVC ngenkqubo ekhethekileyo. Izinto eziluncedo zefayibha ye-fiberglass yelaphu enokusetyenziselwa ukushicilela ilanga inokushwankathelwa ngokulula:
1.Ukufiphaza ubushushu kunye nokugquma kobushushu, ukunciphisa ngokufanelekileyo umthwalo wokungenisa umoya kwaye ugcine amandla omoya;
2. Ngelixa ukufiphaza ngokufanelekileyo, fumana indawo ebonakalayo ebonakalayo ngaphandle kokuchaphazela ukukhanya kwangaphakathi.